The Android edinam egwuregwu ahịa ka toro n'elu-adịbeghị anya na emesịala malitere enye egwuregwu na ji nwayọọ nwayọọ na-esiwanye ewu ewu. E nwere ọtụtụ free edinam egwuregwu nakwa dị ka ụgwọ--play egwuregwu, ma n'agbanyeghị nke egwuregwu ị na-ahọrọ na e nwere ihe maka mmadụ nile.
Ya mere, n'agbanyeghị ebe ị bụ na ị ga-ahụ ihe edinam egwuregwu na-egwu, ma ọ bụ egwuregwu ka dị nnọọ n'oge gara aga na oge na ogologo njem, ma ọ bụ egwuregwu na ị ga-achọ na-ezé gị n'ime.
Ya mere, ebe ndị top 50 edinam egwuregwu na dị na na na niile Android ngwaọrụ.
Play megide ndị ọzọ na-eme ka gị cell na-eto eto ibu site na-eri gị na-emegide. Ma lezie anya, dị ka ibu Player ga-agbalị na-eri gị dị ka nke ọma. Gbalịa gị mma na-adị ndụ na-aghọ nnukwu cell na egwuregwu.
2. warship Agha: 3D Agha Ụwa LL
Ahịa: $1.06 - $53.28
Ịchịkwa ezigbo Agha Ụwa LL arịa na ụgbọ mmiri ha ka ha mmeri. Hazie gị arịa na-agbalị iji merie gị agha. Ụgbọ mmiri ndị USS Arizona na ọbụna HMS Bulldog na akụkọ ihe mere otubo clashes.
Ahịa: $2.50 - $126.0
The Land maka Swiiti - Nsogbu a n'ala swiiti. Rie dị ukwuu swiiti na achicha ka i nwere ike. Ndinuak swiiti ga-ewe gị na-esonụ larịị.
Ahịa: $0.90 - $3.62
Ga-esi na-agba egwú n'ala na egwú na psy. The ọzọ quests ị na mezue ọzọ ego ị ga-arụ. Erite a nnukwu egwuregwu na-anakọta odide, na Dodge okporo ụzọ na nke a swiiti wonderland.
Ahịa: $0.95 - $19.67
Slide, na-agba ọsọ, na-awụlikwa elu na-atụgharị nke a na-akpali akpali egwuregwu. Gbalịa iji gbapụ na a bụrụ ọnụ arụsị, site navigating ndiọk ọhịa, mines na ọnụ ọnụ ugwu. Lee nnọọ otú nnọọ i nwere ike na-agba ọsọ.
Ahịa: $ 0.96- $ 59.05
Free eri ahụ racing egwuregwu ebe ị olulu onwe gị megide ndị ọzọ egwuregwu. Irite onwe gị ọhụrụ anyịnya igwe site emecha ọhụrụ etoju ma na rụzuru. Agbalị aka gị na crazy egwu, na ara ụwa.
7. Dude zuru okè 2
Ahịa: $ 2.60- $ 39.23
Kụrụ atọ gbaa na-uche na-afụ. Ịfụ stof, na-awụlikwa elu trampolines na-agbaji ihe. Olulu gị atọ gbaa megide ndị enyi gị na ndị ala ọzọ, ọbụna Ị kpọghee ekwt pụrụ iche ọdịnaya.
Ahịa: $ 1.23- $ 62.45
A ọhụrụ free edinam egwuregwu Fans nke Lara Croft. Egwupụta eziokwu site na-aga site gburugburu, nke bụ ihe ịma aka na-ahụ otú ogologo oge ị na-adị ndụ. Ụgbọala ngwa ngwa ugbo ala na ọbụna sabotaji enyi gị na relic ọsọ.
9. iju Kọntestị nke agbachitere
Ahịa: $ 0.78- $ 124.90
Nyere Antman ya agha n'ógbè ọchịchọ tinyere ndị ọzọ ịtụnanya odide. -Eme ọbụna ka njikọ aka na ndị enyi gị na-na ọhụrụ quests ọnụ. Wuoro onwe gị a ohuru otu iji gbochie mbibi nke The iju Universe.
10. n'Ụlọ Mkpọrọ ezumike: Lockdown
Ị na-emeghị mpụ otú kwụsị gị ikpe ọnwụ ị ga-eji nkà gị iji gosi gị ọcha. Dozie egwuregwu mgbagwoju anya; iji nkà gị iji na-aghọgbu nche na gị mkpọrọ. Mee ihe ọ bụla ị pụrụ ime iji emecha gbapụ.
11. efu Kombat X
Ahịa: $ 2.46- $ 123.93
Mepụta na-edu gị onwe gị efu kombat otu n'ime agha. Kpọkọtaram otu ìgwè ndị dike na ibuso ya agha na kasị ukwuu ndorondoro na Ụwa. E nwere pụtara ndịna na Punch gị ziri ezi na afo, dị ka ị aka ndị ọzọ egwuregwu na a ọgụ ruo ọgwụgwụ.
12. Nwụrụ Anwụ n'etiti anyị
Ahịa: $ 1.23- $ 124.90
Kweta na-eje ije nwụrụ anwụ na nke a zombie gbaa ha elu egwuregwu. Na-eche ihu ndị nwụrụ anwụ dị ka ị na-akụkụ dị iche iche quests n'ime otutu obodo. Zere zombies na-abụ nanị onye nzọpụta nke dum planet.
13. Top Gear: ụgbọala na-adọkpụ anwụrụ
Ahịa: $ 2.79- $ 131.14
Etipịa dị ka ọtụtụ ìgwè ndị njem ka i nwere ike. Ime ka ihe ka ewe ezigbo na ịbụ akụkụ nke ụgbọala ụgbọala na-adọkpụ ihu offs. Ịzụta ọhụrụ ugbo ala na ọbụna nweta nkwalite gị ugbua họọrọ ụgbọ ala.
14. Ụzọ Mgbapụ
Ahịa: $ 1.10- $ 2.32
Zọpụta ụmụ mmadụ site n'ịgbanahụ gị rọketi. Zọpụta dị ọtụtụ ụmụ mmadụ ka i nwere ike na gị rọketi dị ka ụwa nke gbara gị gburugburu collapses. Na-eche ihu ihe ịma aka ọhụrụ kwa ụbọchị.
15. Sonic ọgba ọsọ
Ahịa: $ 1.15- $ 57.75
Nke a bụ ihe na-agba ọsọ egwuregwu-adịghị agwụ agwụ iji nwalee nkà gị. Nke a ngwa ngwa edinam juru n'ọnụ n'elu ikpo okwu egwuregwu ga-Right Now eji na inyefe dị iche iche ige, gụnyere Historical, Enyi, Ndorodoro Njikọ na World. Anakọta yiri mgbaaka na evolve ike nke gị agwa.
16. Lego Ninja Go ndorondoro
Tinye Mr Chen si mmewere ndorondoro na-emeri ndị ọzọ mmewere nwe-ya. Jiri ike gị site akpọchi gị ezi nwere, na-alụ ọgụ ọzọ elemental Nna-ukwu ọ bụla ha nwere pụrụ iche na ikike.
17. Pixel égbè 3D
Ahịa: $ 1.15- $ 122.05
Igbu nakwa dị ka deathmatch egwuregwu na-egwuri a oge ịse 'em elu egwuregwu. Agha megide ndị enyi gị na hazie gị ọkpụkpọ. Jiri dị iche iche na ngwá agha na agha na-ahụ ma ọ bụrụ na i nwere ike alanarị ke arena.
Ahịa: $ 0.77- $ 124.75
Play a Arcade egwuregwu na mmadụ nile dịrị n'otu ududo ikom na ndị inyom ọnụ megide a iyi egwu. Ịlanarị na-alụ ọgụ 5 bosses n'agha gbakwunyere mezue 25 ọzọ na onye ọ bụla nke. Egwuregwu a nọgidere na-agba ọsọ dị ka ị na-agba ọsọ ebe dị iche iche akụkụ.
19. ise ehihie na abalị Freddy si 3 ngosi
Nke a bụ ngosi version nke egwuregwu nke ga-atọhapụ anya.
Anakọta ntụpọ-eme ka gị na-eto eto ma ọ bụ blob gobble elu nta egwuregwu. A egwuregwu a na mmụọ nsọ site Agar.io; Olulu onwe gị megide ndị ọzọ Player bụ ndị na-agbalị ka ha rie ọ bụla ọzọ. Na egwuregwu a nke eri ma ọ bụ ga-eri. I nwekwara ike zoo na nwa oghere bụrụ na ị bụ obere ezu.
Ahịa: $ 1.20- $ 124.75
Nke a anya pụtara simulator fps ịchụ nta egwuregwu-enyere gị aka achụ nta osisi na ụmụ anụmanụ. Ị ga na-eche na unu bụ n'ezie ndị na anụ dị ka ụmụ anụmanụ ọgụ unu, akpa onwe gị a trofi dị ka ị gbaa ndị nnukwu ụmụ anụmanụ na egwuregwu. Ị ga na-eche ihu cheetahs, ọdụm na ọhịa ndị ọzọ ụmụ anụmanụ.
22. Felata Slimming
Ahịa: $ 2.01- $ 101.36
Gbalịa adịkwa abụba site na nke a egwuregwu. E nwere Obere egwuregwu n'ihi na ị na-agbalị aka gị na, dị ka ị na-agbanwe ọdịdị gị site slimming. The ọzọ ike nri ị na-eri ihe mkpụrụ ego ị ga-akpọkọtara.
23. Lego City My City
Na-a dike na-akwụ ọtụtụ Lego egwuregwu niile na otu ebe. Mee obodo nakwa-etida ha. -Eme ka gị na otu nke demolition ọkachamara, na gbawara ndị ahụ na-ụlọ. Dodge na oncoming okporo ụzọ gị heliplane dị ka ị nyefee ibu n'ọdụ ụgbọ.
24. agbọpụta Ọgụ 2
Ahịa: $ 0.98- $ 49.83
Nke a bụ ọgụ na RPG egwuregwu na otu. Jiri gị karat usoro-eweda ndị mmụọ ọjọọ bosses na-azọpịa onye iro. Alụ ọgụ ụzọ gị site isii ụwa ọ bụla nwere mmụọ ọjọọ dị ka ị na-agbalị na-emechi ọnụ ụzọ ámá nke Onyunyo.
25. Whack Onye Agbata Obi Gị
Dara na onye agbata obi gị na ahụ setịpụrụ banyere igbu ha. Jiri dị iche iche ihe igbu onye agbata obi gị na-eme ka ha anwụ anwụ na ọ kasị jọgburu onwe kwere omume. A keajo obi egwuregwu ga-unu kpuchie ke ibe gị ọbara.
Mezue-egbu egbu ọzọ ke WW2. Onye ọ bụla ozi ga-anwale nkà gị na i na-alụ ọgụ iro agha na Berlin, Germany na ọtụtụ mba ndị ọzọ. Nwere ọtụtụ ngwá agha i nwere, họọrọ onye ị ga-ewepụ gị na-emegide na.
27. agụ iyi Simulator 3D
Play dị ka nnukwu agụ iyi na ichu nta, agha na igwu mmiri. Eri ihe ọ bụla na ihe niile dị gị ụzọ; ike odachi dị ka ị lụsoro ọgụ ihe ọ bụla na-akpali. Ọ bụ ezie na icheta na na a na-ejide na dinta nwere ike tie n'oge ọ bụla. Gbalịa na mezue ichu nta n'ihu gị na-gburu. a
28. Oge a na mbuso 5: blackout
Ahịa: $ 1.23- $ 124.75
Ndị kasị mma fps usoro shooter egwuregwu. Onye ara na-agbalị dọwara ụwa na-shreds, otú ị chọrọ iji nweta onwe gị nke otu juru ọnọdụ ọzọ. Ma ọ bụ nwere ike ị chọrọ ike a otu na ndị enyi gị na-anwale nkà gị.
29. Gunship Agha: Helicopter 3D
Ahịa: $ 1.12- $ 63.27
Na-ekere òkè ọzọ dị ka a helikopta pilot. Ịchịkwa gị helikopta na ụgbọ elu ịme anwansị. Itinye onwe gị na ndị agha ndapụta na-eji gị ọgụ nkà dị iche iche ọzọ.
30. sinipa 3D ogbu
Ahịa: $ 1.18- $ 119.43
Bụrụnụ ndị na-kasịnụ shooter na-alụ ọgụ mpụ na a n'ọtụtụ zuru ụwa ọnụ. Gbaa nza nke dị iche iche na ngwá agha na-egbu onye ọ bụla. Lee gị ọbara isi Ome na ngwa ngwa ngagharị dị ka ị na-azọpụta ndị ahụ tara na-egbu lekwasịrị nke a na-ezo n'ime ìgwè mmadụ ahụ.
31. tanya Nchekwa onwe: iFruit
Jikọọ na gị egwuregwu nke tanya Nchekwa onwe na-egwu fun eme. Mepụta gị nnọọ onwe omenala agba ọrụ; hazie gị onwe gị ọnụ ọgụgụ efere. Ọbụna ịdị na-gị mebere Pita Gbutuonụ nkịta.
32. Miami Crime Simulator
Jiri gị agwa na-akụkụ mpụ. Na-aga gburugburu Miami na ike odachi dị ka ị na-etinye aka na mpụ na n'okporo ámá.
Fps egwuregwu ebe mkpa ka ị na-anakọta blocks iji kwalite gị ngwá agha wdg Style onwe gị dị iche iche na skins, na-eji gị rọketi obubata wepụtara iche iche nke ndị iro. Ejiji gị agwa elu, Ọkwa elu na-anakọta blocks.
34. San Andreas: Real 3D òtù ọjọọ
Ahịa: $ 6.65- $ 133.06
Mepụta na-etinye gị mpụ alaeze n'ime City ndị mmụọ ozi. Ụgbọala ndị ọzọ òtù òtù gburugburu ma napụta nchịkọta. Ọganihu ebe dị iche iche ọzọ dị ka ha na-aghọ crazy na-aka njọ. Ejikwa n'okporo ámá na-azọpụta gị na ezinụlọ gị.
35. Terminator Genysis: mgbanwe
Lụọ igwe na gbapụ n'aka Skynet mkpọrọ, dị ka agbụrụ mmadụ nwere ike ịbụ na brink nke ikpochapu.
Ibuso ya agha na agha na Lego kpakpando agha. E nwere Obere egwuregwu na-edinam juru n'ọnụ, dị ka ị na-alụ ọgụ megide Darth Vader. Ma ọ bụ nyere ịzọpụta ụwa, na Yoda na Jedi site gị n'akụkụ.
37. eriri dike
Jiri gị eriri siwing dị ka Spiderman. Ka ị na-aka iwepụ ihe n'okporo ámá na Bibie ha nke mpụ. Jiri gị karat usoro site na ọkwa dị iche iche.
Jiri gị egbe na égbè nso. Nke a bụ a simulator egwuregwu ma na-enye gị ohere iji gbaa otu n'usoro nke dị iche iche egbe gụnyere égbè mkpụmkpụ, sinipa rifles wdg
39. Dino dinta: Igbu mben
Ahịa: $ 1.20- $ 121.32
Ichu nta dinosaurs ma ọ bụ ga-achụgharị ha. Njem n'ime ụwa nke dinosaurs na-abụ akụkụ nke ihe njem, nke jupụtara na ize ndụ. Ichu nta na a Jurassic ụwa na kemgbe emetụta. Mmeri dị iche iche na ngwá agha na-enweta ụgwọ ọrụ.
40. Ọjọọ: Gods n'etiti anyị
Ahịa: $ 1.93- $ 96.91
Ike gị onwe gị ìgwè nke DC ibu dike na-abanye na arena. Nke a bụ egwuregwu collectible kaadị egwuregwu ahụ bụ free na-egwu. Ị na-ewu elu Nkea, gia, odide na-abanye na arena ebe ị ga na-eche ihu atọ na atọ edinam ọgụ.
41. Ndorodoro Kingdoms: Age nke Ruins
Mee a isi na-azọpịa gị rivals. Instigate raids na-emeri ndị iro gị na-emeri na agha. Jikọọ nnukwu anụ, chi na ndị ọzọ na agha ọnụ dị ka ị na-atụgharị na-agbawa obi agha gị uru.
42. Future Crime Simulator
Simulate dị iche iche mpụ. Na-eje ije, iri ari na ịrụ ọzọ Nkea dị ka ị na-aga ebe dị iche iche ọzọ. Jiri egbe na ndị ọzọ na ngwá dị ka ị obibi mpụ.
43 Modern sinipa
Ahịa: $ 1.99- 99,89
Onye mbụ shooter egwuregwu. Na-aga site mpụ ifo na igba mobs nke ndị iro. Jiri gị dinta nkà gbaa gị iche na-aga n'ihi na headshot. Bụrụnụ ndị na-a nkịtị ogbu dị ka ị na-akụkụ ke ize ndụ ọzọ.
44. égbè Gbaanụ Agha
Onye mbụ gbaa ha elu egwuregwu. Ị bụ onye COMMANDO na ị ga-eche ihu onye iro gị, dị ka ị zuru ezu ihe aga-eme ma bibie ha. Jikọọ na wakpo otu na-enyere onwe gị ịzụta egbe site obon mkpụrụ ego dị ka ị gbaa ndị iro.
45. Oké Osimiri Agha 2
Ọgụ gị na-emegide gị na ụgbọ mmiri. Na-eche ihu dị iche iche na-emegide na n'ezie na oge na gburugburu ụwa. Mepụta a atụmatụ na mgbe ahụ ọgụ gị na-emegide. Ọzọkwa akpali elu site n'ohu dị ka ị chebe gị n'elu ikpo okwu.
46 Banana Kong
Ahịa: $ 1.23- $ 37.41
-Egwu egwuregwu a dị ka Kong na adaka. Ịgbanahụ banana snow ka ị siwing si osisi vaịn na osisi vaịn. Eme ka ụzọ gị site abaitiat, oké ọhịa na treetops dị ka ị na-akpali boulders na ịnyagharịa gị site ọkwa dị iche iche.
47. officer Vegas
-Akụkụ na egbe agha n'Obodo Sin. Ejikwa obodo na emikpu onwe gị na egbe agha. Gbalịa na zuru ezu 80 ọzọ dị ka ị na-emeri mafia agha na-ewu gị squad nke òtù ọjọọ na weghara Vegas.
48. Nwere Obi Ike Frontier
Ahịa: $ 0.93- $ 59.53
Zọpụta n'ala Ukwu Gaia si n'aka Chineke Maxwell. E nwere anụ ọhịa na ndị dike na-anakọta, dị ka ị evolve kpọọ. E nwere kwa ụbọchị ihe ịma aka na-eche ihu, ma ị nwere ike nweta nkwalite onwunwe na owuwe ihe ubi ihe. Control anụ ọhịa ma na-dimkpa bụ dike na-alụ ọgụ maka gị.
49. ukwu Steel agbachitere
Ahịa: $ 2.52- $ 124.75
Mee gị onwe gị robot na-alụ ọgụ ọzọ chị ígwè ọrụ robot. Mee colossal robots na-akụkụ na ndorondoro nke na-agụnye 20 akpata ịlụ ọgụ. -Akụkụ na-akparaghị ókè sparring sessions na-ekpebi gị atụmatụ dị ka ị na-enwe 30 dike ịma aka.
50. Obere Cops na-apụnara mmadụ
Ahịa: $ 0.98- $ 99.73
Nke a bụ a 3D shooter pixel egwuregwu. Play dị ka otu ọkpụkpọ ma ọ bụ ọtụtụ. Get aka gị na n'elu 15+ ngwá agha na irite ego dị ka ị na-eme na-egbu. Ọbụna inwe ụgwọ ọrụ maka iche iche nke na-egbu ma na-eto dị ka ị na-enwe ọganihu site na usoro.
> Resource> emulator> Top 50 Android Action Games